Vagari veDunhu reMasvingo Vokurudzirwa Kuramba Vachinyoresa Kuvhota
Chirongwa cheBVR chichiri kuenderera mberi mumatunhu ose emunyika kunyange hazvo mop-up yakapera
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muMasvingo ari kukurudzira vasina kunyoresa kuvhota kuti vaende kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission, ZEC kumatunhu avo akasiyanasiyana vachinyoresa sezvo chirongwa ichi chiri kuenderera mberi.
Mukuru wesangano revagari vekuMasvingo, re Masvingo United Residents and Rate Payers Alliance, VaAnoziva Muguti, vanoti sangano ravo rine zvirongwa zvakawanda zvekukurudzira vagari vasina kuwana mukana kuti vanyorese kuvhota sezvo nguva ichiripo.
"Tiri kunderera mberi nezvirongwa zvekudzidizsa nekukururdzira vanhu kuti vaende vandorejista kuvhota, chero blitz yakapera, kuvagari tiri kuvaudza kuti vaende ku provincial ne district offices vandonyoresa ikoko kusvika tazosvika kuNomination Court. Saka tine ma activities akawanda, door-to- door, ma roadshows pamwe nema meeetings ekuvadzidzisa nekukurudzira kuti vanyorese kuvhota."
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMasvingo Human Rights Trust, VaTinaye Mapingure, vanoti vari kuita zvirongwa zvekusvitsa dzidziso nemashoko kuvanhu sezvo ZEC isina kuita basa rayo nemazvo rekushambadza chirongwa chekunyoresa.
VaMapingure vanoti ikodzero dzevanhu kuwaniswa ruzivo rwekuti chirongwa chekunyoresa hachisati chapetwa.
"Isu seMasvingo Human Rights Trust ticharamba tichikuridzira nekuzivisa vanhu kuti registration yapera ndeye blitz ye outreach yaiitwa ne ZEC, kwasara kuti ivo veZEC vari pamahofisi avo pama districts ne ma provincial vachiri kurejista, kunzvimbo dzose dzaka tekeshera muMasvingo, kunana Chiredzi, Zaka, Chivi kana Mwenezi. Tinoti endai mundo rejista kuvhota nekuti mukuvhota ndimo munounza budiriro munyika sezvo wamunovhotera vachiita kuti zviite kana zvimire."
Mukuru weMasvingo Center for Research and Community Development, VaAleck Tabe, vanoti vari kurudzira vechidiki nemadzimai kuti vanyorese sezvo ongororo dzavo dzakubuditsa pachena kuti havana kunyoresa nehuwandu hwavo hwese panguva iyo ZEC yaipinda muvanhu ichinyoresa.
VaTabe vanoti vari kukurudzira vechidiki kuti vashandise mukana uyu wasara pakunyoresa.
"Takaita ongororo yekuona kuti pakurejistwa kwakaitwa gore rino, vechidiki nemadzimai vakabuda here nehuwandu hwavo, tikaona kuti ayewa, tichikombeya ne maresults a 2013 vechidiki nemadzimai havana kubuda nehuwandu hwavo, nenyaya yezvigozhero ma proof of residence anga achinetsa nemufambo wakakura waivapo kwainyoreswa saka tiri kuvakurudzira kuti vanyorese nekuti ikodzero dzvavo."
Mukuru we ZEC muMasvingo, VaZex Pudurai, vanoti pachirongwa chavo chakapera svondo rapfuura, vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu nezvishanu vakanyoresa muMasvingo uye pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vakanyoresa nyika yose.